Xasan Sheekh iyo Xidhibaano katirsan Golaha Shacabka oo gaaray Garowe – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaiya Xasan Sheekh Maxamuud, Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi, Xildhibaan Faarax Cabduqaadir iyo Xildhibaano kale ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Wafdigaan ayaa lagu wadaa iney ka qeyb galaan Munaasabadda caleema-saarka Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ayaa waxaa ku soo dhaweeyay madaxda Maamulka Puntland iyo Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo uga sii horeeyay Garowe iyo masuuliyiin kale.
Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS ayaa sidoo kale garoonka waxaa uga hortagay Tobaneeyo shacab ah oo watay boorar ay ku qornaayeen soo dhaweynta Xasan Sheekh iyo magaca Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ee UPD.
Masuuliyiintaan ayaa ka qeyb galaya Munaasadda caleema-saarka ee Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo lagu wado iney berri ka dhacdo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Masuuliyiin kale ayaa sidoo kale ka qeyb galaya Munaasabadda caleema-saarka ee ka dhacayso Puntland taas oo ay ku kulmayaan mucaarad iyo muxaafad aad isaga soo horjeedao.